ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူများသည် ကြွက်သားများ၏ သန်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းပြီး ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခြင်း - Glucerna Myanmar
ကြွက်သားများကို ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့်အတူ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသည် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ခြေဖျားလက်ဖျားများသို့ သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေခြင်း နှလုံးကို စိတ်ဖိစီးမှုမှ လျော့ကျသက်သာစေသည့်အပြင် ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ကောင်းစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Glucerna သည် ပရိုတင်းဓာတ်များပိုမိုပါ၀င်ခြင်းဖြင့် သင်၏စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ရန်၊ ကြွက်သားများကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် သင်၏ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအခြေအနေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် အဓိကကျသော အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါမည်။
ပရိုတင်းဓာတ်သည် ကြွက်သားတည်ဆောက်မှု၏ အဓိကဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှ ၎င်းကိုလုံလောက်စွာမရရှိပါက၊ အထူးသဖြင့် အစာစားချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ရန်အလို့ငှာ ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်ရန် အတွက် အရံချန်ထားသော ပရိုတင်းဓာတ်မှ ထုတ်သုံးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့‌ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ အသုံးပြုသည်ထက် ပိုမိုပံ့ပိုးပေးရန် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပရိုတင်းဓာတ်များ လိုအပ်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပရိုတင်းဓာတ်များ ကို ကြက်သား၊ တူနာငါး၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ အရည်အသွေးမြင့် ဒိန်ခဲနှင့် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီ ပရိုတင်းဓာတ်ပါ၀င်သော ဖျော်ရည် သို့မဟုတ် သရေစာတစ်ခုခု စားသောက်ခြင်းသည် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် ကြွက်သားများမှ အမိုင်နိုအက်ဆစ် စုပ်ယူမူနှင့် ကြွက်သား ပြန်လည်ပြုပြင်မှုများကို အားကောင်းစေပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ကစီဓာတ် နှင့် ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများသည် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်မြင့်တက်မှုကို နှေးကွေးစေသည်။ (သွေးတွင်းအချိုဓာတ်အညွှန်းကိန်း သတ်မှတ်ချက်ကို ၁ မှ ၁၀၀ထိ သတ်မှတ်သည်) သို့သော် အရသာအကြိုက်အမျိုးမျိုးကြောင့် ဆီးချိုသွေးချိုရှိသူအများစုသည် အာဟာရလုံလောက်စွာ မစားသုံးနိုင်သောကြောင့် ဖြည့်စွက်စာများ စားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို ဖြည့်စွက်စာများသည် ဆီးချိုသွေးချိုသမားများအတွက် သီးသန့်ဖြစ်သောကြောင့် သွေးတွင်းအချိုဓာတ် မတည်မငြိမ်ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သုတေသန နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော်နှင့် လက်တွေ့လေ့လာမှုပေါင်း (၅၀) ကျော်ပြုလုပ်ထားသော Glucerna ၏ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ကစီဓာတ်စနစ်သည် Myo-inositol ၄ ဆ ( အင်ဆူလင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် တုံ့ပြန်မှုကို ကောင်းမွန်စေသော ကစီဓာတ်)ပါ၀င်ပြီး ကြွက်သားထိန်းသိမ်းမှု အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အာဟာရများထောက်ပံ့ပေးပြီး ကစီဓာတ် ထုတ်လွှတ်မှုကို နှေးစေသည်။ ပရိုတင်းဓာတ်သည် ကိုယ်ခန္ဓာမှရောဂါများကို တိုက်ထုတ်ပေးသော ပဋိဇီဝပစ္စည်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး နှလုံးကျန်းမာစေသည့် အဆီပါ၀င်သော Glucerna သည် ဗီတာမင် A,D နှင့် ဇင့်ဓာတ် ကြွယ်ဝသောကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များလည်ပတ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်စေပါသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုသမားများသည် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ‌ကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများအတွက် ဆေးဝါးများသောက်သုံးနေရသော‌ကြောင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသည် လုပ်ရန် မလိုအပ်ဟု ထင်တတ်ကြပါသည်။
စိတ်ချရစေရန် ဆရာ၀န် နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး သင့်လျော်သောအကြံပြုချက်များကို ရယူပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သွေးစီးဆင်းမှုကို ‌ကောင်းစေခြင်း နှင့် အင်ဆူလင်၏တုံ့ပြန်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း ကြောင့် နောက်ကျော၊ ခြေထောက် နှင့် ရင်ဘက်ရှိ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုအကျိုးထိရောက်စေပါသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းမှသည် နှလုံးခုန်နှုန်းကို မှန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှ ချွေးထွက်စေသည့် လေ့ကျင့်ခန်းမှန်သမျှသည် သင့်အတွက် ကောင်းမွန်စေပါသည်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများသည် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်အပေါ်တွင် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်တွင် သင့်၏ကြွက်သားများသည် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကို စွမ်းအင်အဖြစ် အသုံးပြုသောကြောင့် သင့်သွေးထဲတွင် သွေးတွင်းအချိုဓာတ်မြင့်တက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဆက်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများပုံမှန်လုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ကယ်လိုရီများကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး သကြားဓာတ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အာဟာရနှင့် ကြွက်သားမှတ်ဉာဏ်များကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကြွက်သားများ ထိန်းသိမ်းရာတွင် ပိုထိရောက်စေပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးရုံသာမက စိတ်ခံစားချက်နှင့် သွေးပေါင်ချိန်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး နှလုံးအားစိုက်ရခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ သို့သော် သတိထားသင့်သည့်အချက်မှာ သင်သည် အချိန်အကြာကြီး အထိုင်များပါက လေ့ကျင့်ခန်းကို ချက်ချင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ သင်သည် တစ်ခဏနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းဆက်မလုပ်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာများ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။ သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်က လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီ သင့်အတွက် သင့်လျော်သောအကြံပေးချက်ကို ပြောပြပေးနိုင်ပါသည်။
Chee WSS et al.BMJ Open Diabetes Res Care. 2017
Sun J et al. Asia Pac J Clin Nutr. 2008